ဒီထက်ပိုပြီးသောင်းကျန်းလာရင် နောက်လာမယ့် Event တွေဖျက်ပစ်မယ်လို့ သတိပေးခံရတဲ့ ‘Love Live’ Fan တွေ
On December 28, 2017 January 22, 2018 By Atsuko
တချို့လူတွေက ရှိုးပွဲတွေမှာ အားရပါးရအားပေးရတာကို ဝါသနာပါကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေးလူတွေကို အနှောင့်အယှက်အကြီးကြီးဖြစ်စေတဲ့အထိ အားပေးမိရင်တော့ ရှိုးပွဲစီစဉ်သူတွေရဲ့သတိပေးခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့တုန်းက တိုကျို Akihabara UDX မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Love Live! Sunshine!! event မှာ အဲဒီလိုအားရပါးရအားပေးတတ်တဲ့ fan တစ်စုက အခြားပွဲလာပရိသတ်တွေကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အထိ သောင်းကျန်းခဲ့ကြတာမို့ ကြည့်မရသူတွေက သူတို့အဖွဲ့သောင်းကျန်းနေကြတာကို ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး twitter ပေါ်တင်လိုက်ကြပါတယ်။
အဲဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာဆိုရင် လမ်းသွားလမ်းလာတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အထိ အော်ဟစ်အားပေးခဲ့ကြတာတွေ၊ ကြည့်တဲ့သူမျက်စိကျိမ်းလောက်တဲ့အထိ Light Stick တွေအများကြီးနဲ့ ဝှေ့ရမ်းအားပေးခဲ့ကြတာတွေဟာ တကယ်လည်း သာမန်ပွဲလာပရိသတ်တွေ မျက်စိစပါးမွှေးစူးချင်စရာပါပဲ။
ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာတော့ Love Live ရဲ့ official website မှာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကြေညာချက်တစ်ရပ် ကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကြေညာချက်မှာ လမ်းသွားလမ်းလာတွေ အဆင်မပြေဖြစ်စေတဲ့အထိ လမ်းတွေမှာစုဝေးခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ဓာတ်ပုံဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့၊ လုံခြုံရေးနဲ့ မန်နေဂျာတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာပေးကြဖို့၊ အနုပညာရှင်တွေကို stalk မလုပ်ကြဖို့ စတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလိုအဆင်မပြေမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဦးမယ်ဆိုရင် အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ event တွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
အဲဒီတော့.. ကြိုက်တာလည်းကြိုက်တာပေါ့နော်၊ ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းလေးနဲ့ အားပေးကြပါလို့…
Ref: Hachima Kikou
PREVIOUS POST Previous post: သံစဉ်လေးထဲ မေ့မျောသွားစေမယ့် EXO ရဲ့ အသစ်စက်စက် MV – Universe
NEXT POST Next post: K-Pop အနုပညာရှင်တွေ မျက်နှာပန်းလှသွားတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အလှပဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင် ၁၀၀ စာရင်း